Naya Post Nepal | चो’रीको आ’रो’पपछि महेश खड्काको क’डा जवाफ, वसन्त सापकोटालाई चु’नौ’ती (भिडियोसहित)
चो’रीको आ’रो’पपछि महेश खड्काको क’डा जवाफ, वसन्त सापकोटालाई चु’नौ’ती (भिडियोसहित)
काठमाडौं । संगीतकार महेश खड्काले चर्चामा आउनका लागि संगीतकार वसन्त सापकोटाले आफूमाथि संगीत चो’री’को आ’रो’प लगाएको दा”बी गरेका छन् । कानुनी रुपमा आ’रो’प प्रमाणित गरेर देखाए आफू सजाय भोग्न तयार रहेको खड्काको भनाइ छ ।
आ’रो’प प्रमाणित गर्न नसके मानहानीको मुद्दा दायर गर्न सक्ने समेत उनले बताए । अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको गीत ‘नोगेन’को संगीत आफ्नो गीत ‘सागर सरी’सँग मिलेको सापकोटाले आ’रो’प लगाएपछि संगीतकार खड्काले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले यो आ’रो’प प्रमाणित गर्न चु’नाै’ती दिए ।
खड्काले भने, ‘कि चो’रेको हो, मिलेको हो भनेर आ’रो’प प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ । नत्र म कानुनी उपचारमा जान्छु । मेरो मा’न’हा’नी भएको छ । मैले ३० वर्ष लगाएर यो क्षेत्रमा कमाएको ख्यातिको अ’प’मा’न भएको छ ।’
कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै पनि संगीतकार सापकोटाले कुण्ठित मनसायले आ’रो’प–प्र’त्या’रो’प लगाउँदै मिडियाबाजी गर्दै हिंडिरहेको उनले बताए । संगीतकार खड्काले प्रश्न गरे, ‘उहाँलाई एकाएक अहिले चर्चाको खाँ’चो किन पर्यो ? चर्चाको विषय बनेर आफू अघि आउनुपर्ने कारण के पर्‍यो ? यही कुरामा छ”क्क’ परिरहेको छु ।
उहाँ त चर्चित संगीतकार नै हो ।’ सापकोटाले आफ्नो च’रित्र’ह”त्या’ गर्ने उद्देश्यले नै यो कुरा उठाइरहेको खड्काले जिकिर गरे । संसारभर भएका ताल, सुर र रागबाटै संगीत सिर्जना हुने र त्यसलाई आफ्नो प्रकारले ढालेर गीत–संगीत तयार गरिने खड्काले बताए । एकले अर्कालाई आ’रो’प लगाउने हो भने नेपाली संगीत क्षेत्र अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘कुनै गीतमा दुई नोट मिल्यो भन्दैमा अर्कालाई चोर भन्ने, त्यो खालको आ’रो’प प्र’त्या’रो”प गर्नै हो भने संगीत गर्छु भनेर कोही अगाडि नबढे हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कुराले घा”त त अब वसन्त भाइ स्वयंलाई गर्छ । उहाँका पनि केही कृतिहरु होलान् जहाँ दुई नोट, चार नोट मिलेका होलान् । त्यो निस्किए भने के हुन्छ ? उहाँले अरुलाई के भन्नुहुन्छ ?’
काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीं केही कुरा मिलिरहेको हुनसक्ने भन्दै उनले अरुको सिर्जना चोरेको वा नचोरेको कुरामा सचेत रहेको खड्काले बताए । उनले अगाडि भने, ‘सम्पूर्ण नोट, कर्ड, ताल मैले निर्माण गरेको होइन ।
नोटभित्रबाट म खेल्ने हो । र, नयाँ प्रकारको मेलोडी निर्माण गर्ने मेरो काम हो । त्यसमा पनि गायनमा कसरी गाइएको छ, त्यसलाई लिने तरिका कस्ता हुन्छन् ? मुर्गीहरु कहाँ कति घु’माइएको छ । उच्चारण कसरी गरिएको छ ? यी सबै कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ ?’
प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी ऐनअनुसार छानबिन गरेर आफू दो”षी देखिए द’ण्डि’त हुन तयार रहेको समेत खड्काले बताए ।
२०७८ माघ २९, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 229 Views
आमा हजुरआमा गुमाउदा भाग्यले बाचेका छोरा , स्याङजाको कहाली लाग्दो घ’टना १४ को गयो ज्या’न ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
गठबन्धनले जितेकाे उत्सव मनाउन आउँदै गरेकाे गाडीमा करेन्ट लागेर २ जनाकाे मृ,त्यु
भरतपुरको विहानी अपडेट ४ वडाको मतगणना सकिँदा यस्तो आयो मतपरिणाम
विजय जुलुसका लागि मान्छे लिन गएको हाइस दु”र्घटना ३ को मृ”त्यु
गुल्मीमा कांग्रेसको बिजयी जुलुश (भिडियो सहित)